I-Fiesta entsha ifeza izidingo zabashayeli | Isolezwe
I-Fiesta entsha ifeza izidingo zabashayeli
ezezimoto / 29 July 2018, 12:11pm / FANELESIBONGE BENGU
I-Fiesta entsha ifika ngezinhlobo ezimbili - iTrend neTitanium enezinto eziningi. Namuhla sivivinya iTrend kadizili
ESIKHATHINI lapho wonke umuntu ekhala khona nokunyuka kukaphethroli nodizili, uyayidinga imoto efeza izidingo futhi ingadli kakhulu.
Mayebizwa amagama alezo zimoto neFiesta iyaphakamisa ukuthi elayo lingasali ngaphandle.
I-Fiesta entsha ifika ngezinhlobo ezimbili - iTrend neTitanium enezinto eziningi. Namuhla sivivinya iTrend kadizili.
Ngaphambili ishaya ngegrille ethe ukuvuleka futhi inamalambu amasha nama-fog lamps ngezansi.
Ithe ukuba yinde ngo-71mm uma uyiqhathanisa nendala futhi ububanzi bayo buvuleke ngo-13 mm. Ukululeka kwayo kwenza ukuthi isikhala sokuhlala sivuleke kwazise i-legroom inde ngo-16 mm futhi inezihlalo ezintofontofo.
Ngemuva yehluke kakhulu kunendala indlela amalambu ayo ami ngayo ngoba asemaceleni okuyenza ibukeke ivulekile.
Ngaphakathi okuhle nayo yi- touchscreen engu-6.5 inch eyena impilo ibe lula. Kuyona udlala umsakazo nokuxhuma iselula ngoba ine-Apple CarPlay. Ngaphandle kokwenza impilo ibe lula yenza ibukeke kahle ngenxa yokuncipha kwamabhathini.
Inezindawo ezimbili zokufaka ama-USB, idlala iCD futhi inezipikha eziyisithupha.
Kukhona futhi ne 4.2 inch multifunction TFT display entsha kwi-instrument cluster. Isiteringi sayo sinezinkinobho ezilawula i-cruise control nokunye.
Injini eyongayo yi-1.5 litre TDCI turbodiesel etholakala kuphela ngo-gearbox omusha oyi-6 speed manual. Inamandla angu-63 kW netorque engu-175 Nm.
Iyazicisha injini uma imile futhi inebhathini lika-Eco ukuze yonge. Ngemuva kokuhamba ibanga elingu-666km izinsuku eziyisikhombisa ibidla amalitha angu-6.0 ngo-100km.
Amandla ayo enele kodwa ezindweni ezinyukelayo iyakhathala nokuphoqa ukuthi wehlise igiya. Engikuthandile ukuba ntofontofo kwayo okulekelelwa nangamasondo ayo anamarimu angu-16 inch.
Ngakwezokuphepha iphuma nama-airbag ngaphambili, emaceleni nama curtain airbags. Ifika futhi nama-ABS brakes ane-Electronic Brake Assist ne-Electronic Brakeforce Distribution kanjalo neHill Launch Assist ne-Electronic Stability neTraction Control.
Ngokwami iFiesta yimoto ekahle ikakhulukazi ngokuthi yinhle, ayiwuphuzi kakhulu udizili futhi ivulekile. Lokhu kuyenza ikwazi ukubhekana ngqo nezimbangi ezinjengePolo okuyiyo ezitamuzela abathengi kulesi sigaba sezimoto.
Zonke ziphuma ne warranty yeminyaka emine noma ibanga lika-120 000km, roadside assistance yeminyaka emithathu ne corrosion warranty yeminyaka emihlanu. Kukhona ne service plan yeminyaka emine noma * -60 000km kanti kumele iye kwisevisi ngemuva kwebanga elingu-15 000km.